अन्तर्वार्ता Archive - Balbatika
अस्मिता थापा कक्षा ८ शंकर इन्टरनेशनल इङ्लिस स्कुल शंकर स्कुल नै किन रोज्यौ त ? यो स्कुलमा मैले ३ कक्षाबाट पढ्न सुरु गरेँ । बुवाआमालाई राम्रो लागेर मलाई यो स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भएको हो । स्कुलमा अहिलेसम्मको तिमो अनुभव...
फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार हामीसँग भएको ३४ हजार विद्यालय मध्ये २८ हजार सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । यी विद्यालयहरूलाई एउटै न्यूनतम स्तरमा ल्याउने कि नल्याउने ? कहिँ हावा लागेपछि पढाइ नहुने अवस्था छ, कहिँ तारे होटल जस्ता स्कुलहरू छन् हाम्रो देशमा...